Waxyaabaha ugu Wanaagsan ee Waxsoosaarka Wanaagsan ee Ka Soo Baxa Shiinaha Warshadda Barkimooyinka Buuxsamay ee Qiimaha Jaban | Rayson
Foomka Foomka Xusuusta ugu fiican ee VS guga Martida
Barkimo xumbo xasuus jumlo g jumlo leh oo leh goodprice-Rayson
1.Mudo intee le'eg ayey tahay in joodarigaagu socdo?
Joodar walba wuu ka duwan yahay. Haddii aad tuurto habeenkii ama aad ku soo toostid xanuun waa waqtigii aad heli lahayd furaash cusub iyada oo aan loo eegin da '. Waxaan kugula talineynaa inaad hubiso sumadda sharciga oo aad bedesho ugu yaraan sideedii sanoba mar.
2.Waa maxay qaababka lacag bixinta ee aad aqbasho?
LC ee aragtida / TT, 30% Deposi iyo 70% dheelitirka ayaa ka soo horjeeda nuqulada dukumiintiyada dhoofinta ee witinin 7 maalmood oo shaqo ah.
3.Sidee baan ku heli karaa tijaabooyinka qaarkood some
Ka dib markaad xaqiijiso dalabkeenna oo aad noo soo dirto qiimaha muunadda, waxaan ku dhammeyn doonnaa muunadda 15 ~ 20 maalmood gudahood. Waad weydiisan kartaa shirkadda xawaaladda in ay muunad ka qaadato shirkadeena ama waxaad noo soo diri kartaa lambarka koontada ururinta ee DHL, FedEx ama UPS, waxaan saamiga kuugu soo diri karnaa koontadaada.
1. Macaamiisha doonaya inay wax badan ka ogaadaan wax soo saarkeena cusub
ama shirkadeena, kaliya nala soo xiriir. Waxaan si adag u raacnaa nidaamka xakamaynta tayada caadiga ah si loo hubiyo in alaabooyinkeenu ay la kulmaan ama ka bataan filashooyinka macaamiisheena. Intaa waxaa dheer, waxaan bixinnaa adeegyo iib ah kadib iibka macaamiisha adduunka oo idil.
Tan iyo markii la aasaasay, Rayson wuxuu ujeedkiisu yahay inuu siiyo xalal aad u fiican oo cajiib ah macaamiisheenna. Waxaan dhisnay R
D xarun loogu talagalay naqshadeynta wax soo saarka iyo soosaarka wax soo saarka.& 4.Waxaan ballan qaadaynaa in badeecooyinka loo diro macaamiisha iyagoo nabad qaba oo xasiloon. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad rabto inaad wax badan ka ogaato our si toos ah noo soo wac.
Rayson Global Co., Ltd waa shirkad wadaag ah oo Sino-US ah, oo la aasaasay 2007 taas oo ku taal Shishan Town, Foshan High-Tech Zone, waxaana ag fadhiya shirkadaha caanka ah sida Volkswagen, Honda Auto iyo Chimei Innolux. qiyaastii 40 daqiiqo oo baabuur ah oo ka socota Madaarka Caalamiga ah ee Guangzhou Baiyun iyo Hoolka Carwada Carwada ee Canton. Xafiiskayaga guud
JINGXIN " wuxuu bilaabay inuu sameeyo silig guga loogu talagalay wax soo saarka furaashda furaashka 1989, ilaa hada, Rayson ma aha oo kaliya warshad furaash (15000pcs / bishii), laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah furaashyada ugu weyn ee furaashyada (60,000pcs / month) iyo PP dhar aan tolmo lahayn (1800ton / bishii) soosaarayaasha Shiinaha oo in ka badan 700 oo shaqaale ah. In ka badan 90% wax soo saarkeena waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Amerika, Australia iyo qeybaha kale ee adduunka. Waxaan siinaa qaybaha joodariga Serta, Sealy, Kingkoil, Slumberland iyo noocyada kale ee caanka ah furaashyada caalamiga ah. Rayson waxay soo saari kartaa joodariga guga jeebka, joodariga guga bonnell, joodariga guga oo isdaba joog ah, furaashka xumbada xusuusta, furaashka xumbada iyo joodariga cinjirka iwm. "
Warshadda Barkinta Jiifka Jumlada Shiinaha ee ugufiicanPrice-Rayson
Soosaarayaasha barkin gacmeedka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee FromChina